E-Book for Bikram: यौनवर्द्धक औषधि जान सक्ला है ज्यान
यौनवर्द्धक औषधि जान सक्ला है ज्यान
युवामञ्च, जेठ २०६९
यौनशक्तिवर्द्धक तेल तथा उपकरणहरूको विज्ञापन अखबारहरूमा बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ । विभिन्न हेल्थ सेन्टरहरूको होर्डिङबोर्डमा पनि यस्ता सन्देश पढ्न पाइन्छ । यस्ता औषधि तथा उपकरण के साँच्चिकै प्रभावकारी
हुन्छन् ? उपभोक्ताहरू यसका प्रभावबारे कतिको जानकार छन् ? देवबहादुर कुँवरको खोजी ।
यौनवर्द्धक औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । भियाग्राको प्रयोगबाट मानिसको नसा फुलेर रक्तचाप बढाइदिने हुँदा मुटु नै बन्द हुनसक्ने खतरा छ । कहिलेकाहीँ त यौन सम्बन्ध राख्दा राख्दै ज्यानै जाने पनि हुन्छ । औषधिको 'साइड इफेक्ट' बाट मानिसको अनुहार सुन्निने, टाउको दुखिरहने, आँखा धमिलो हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् । यसैले मुटु रोगका बिरामीहरूले चिकित्सकको परामर्शविना यस्ता यौनवर्द्धक औषधिहरूको प्रयोग गर्नु भनेको काल निम्त्याउनु बराबर हो ।
Posted by Bikram Lohar at 11:10:00 AM